Kajy ny welded vy tohatra amin'ny bowstring zigzag
Kajy ny vy tohatra amin'ny bowstring zigzag
Kajy ny mahitsy tohatra zigzag vy bowstring
Kajy ny fanorenana vy tohatra amin'ny bowstring zigzag.
Famaritana ny habetsaky ny sodina ny profil kofehy.
Ny zoro ny fisainan'ny tohatra.
Fitaovana faritra dingana.
Tolo-kevitra ho an'ny mety tohatra.